फोहोर नै तह लगाउन नसक्ने कम्युनिस्ट सरकार गर्छ रेलका कुरा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
फोहोर नै तह लगाउन नसक्ने कम्युनिस्ट सरकार गर्छ रेलका कुरा !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापन नै गर्न नसकिरहेका बेला कम्युनिस्ट नेताले रेल र पानी जहाजका गफ सुनाउने गरेका छन् ।
गफ जेसुकै हानेपनि काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बढ्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य फोहोर व्यवस्थापनलाई अलपत्र छाडेर विदेश घुमिरहेका छन् । नुवाकोटको सिसडोलको विकल्प तयार नभए अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनी नेपवेस्टले काठमाडौंको फोहोर नउठाउने संकेत दिएको छ ।
साउन पहिलो साता लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आगामी पुसदेखि काठमाडौंको फोहोर उठाउने जिम्मा दिने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । कम्पनीले हालसम्म काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकासँग समझदारीको कोसिस नै गरेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सम्झौताअनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक काठमाडौंका सबै स्थानीय निकायबाट उक्त कम्पनीले फोहोर उठाउने जिम्मा पाएको छ । अहिलेको ल्यान्डफिल साइट सिसडोल भरिसकेको र अर्को वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार नभएकाले कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन अनकनाइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीले बताए ।
कम्पनीले फोहोर प्रशोधन प्लान्ट बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने र त्यति समयसम्म फोहोर उठाएर विसर्जनका लागि वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट बनाइदिन अनौपचारिक आग्रह गरेको छ ।
‘हामीसँग सम्पर्क गर्न आएका छैनन् कम्पनीका मान्छे,’ काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको वातावरण विभागका प्रमुख हरि कुँवरले भने, ‘त्यो कम्पनीले साँच्चै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन खोजेको हो भने हामीलाई पनि सम्पर्क गरिहाल्थ्यो नि ।’
सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेको र जुनसुकै वेला पनि पहिरो गएर दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था भएको भन्दै सरकारले अर्को वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार गर्नुपर्ने सर्त कम्पनीले राखेको छ । सिसडोलमा ठूलो पहिरो गए त्यहाँबाट निस्कने लिचडले त्रिशूली नदीसमेत प्रदूषित हुने र त्यसबाट ठूलो वातावरणीय र जैविक असर पुग्ने खतरा रहेको उक्त कम्पनीले औंल्याएको छ । अहिले उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रकहरू फोहोरमाथि माटो छापेर बनाइएको बाटोबाट फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् ।
अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन एक वर्ष लाग्ने
वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार गर्न पनि एक वर्ष लाग्ने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन जमिन सम्याएर पहिला ग्राभेल बिछ्याउनुपर्ने, बेसमुनि पानी सोस्न पाइप राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ग्यास निस्कने पाइप जडान गर्नुपर्ने र ग्यास वातावरणमा मिसिनबाट रोक्न ग्यास ट्याप गर्ने उपकरण जडान गर्नुपर्ने बाटो बनाउनुपर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने हुनाले धेरै समय लाग्ने ती कर्मचारीले बताए । अस्थायी ल्यान्डफिल साइट निर्माणमै २५–३० करोड रुपैयाँ लाग्ने र तत्काल निर्माणको काम थाले पनि एक वर्षजति समय लाग्ने बताइएको छ ।
अस्थायी ल्यान्डफिलका लागि जग्गै छैन
सिसडोलदेखि दुई किलोमिटर पर नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने गरी प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइटको करिब १८ सय रोपनी जग्गामध्ये चार सय रोपनी निजी कम्पनी नेपवेस्टलाई दिएको छ । त्यसमध्येको १०० रोपनी जग्गा मैदान रहेको छ भने बाँकी भिरालो छ ।
उक्त मैदानी भागमा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्ने सोच कम्पनीको छ । तर, काठमाडौंबाट उठाइएको फोहोर लगेर तत्काल राख्न थप सय रोपनी जग्गा चाहिने र त्यो जग्गा कहाँ छ भन्ने कुरा नै यकिन भइसकेको छैन ।
लगानी बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिका र नेपवेस्टका प्रतिनिधिले सोमबार नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइट–बन्चरेडाँडाको संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेका छन् ।
लगानी बोर्डले कीर्तिपुरबाहेक काठमाडौंका सबै नगरपालिका र महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकासँग थप समझदारी गर्न बन्चरेडाँडाको अवस्था निरीक्षण गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । ‘बन्चरेडाँडाको अवस्था, फोहोर छुट्याउने र प्रशोधन गर्ने ठाउँ उपयुक्त भए–नभएको निरीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार टोलीले निरीक्षण प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएपछि काठमाडौंका स्थानीय निकायसँग सहमति गर्नेछ । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको एक्सन प्लान ल्याऊ भनेका थियौँ, सोही एक्सन प्लान तयार गर्न पनि हिजो फिल्ड भिजिट गरिएको हो,’ उनले भने ।
कुन–कुन स्थानीय निकायको फोहोर नेपवेस्टले उठाउँछ ?
आयोजना विकास सम्झौताअनुसार आगामी पुसदेखि नेपवेस्टले कीर्तिपुरबाहेक काठमाडांैका सबै स्थानीय निकायको फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो चरणमा नेपवेस्टले काठमाडौं महानगरपालिकासहित दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंकरापुर गरी नौ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेछ ।
कम्पनीले २० वर्षमा तीन अर्ब रोयल्टी बुझाउँछ
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत् सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउने छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले फोहोरमैलाबाट चारदेखि पाँच मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने जनाएको छ । उठेको फोहोरमध्ये बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिनेछ ।
कम्पनीसँग एक्सन प्लान मागेका छौं : प्रवक्ता वाग्ले
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको नेपवेस्टसँग कार्ययोजना मागिएको बताए । ‘हामीले उहाँहरूसँग एक्सन प्लान मागेका छौँ, रिपोर्ट बुझाइसक्नुभएको छैन,’ उनले भने ।
कम्पनीले एक्सन प्लान बुझाएपछि लगानी बोर्डलाई चित्त बुझे काठमाडौं महानगरपालिकासहितका अन्य स्थानीय निकायसँग थप सहमति हुने र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम्पनीले लिने उनले बताए ।